Danyartiyo Wadhatada Waayaha Ku Gadaaman
(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 12, 2019 08:16:03
Dantaa soo wada saartay waxaad ka garataa dushooda diifta ka muuqataa maxaa Himiladii ay lahaayen hagaasisay
ummad adagi waxay ka soo baxdaa bulsho is xaal og soona martay duruufo adag balse maalinba maalinta ka denbaysa u sii dhawaanaya hanashada guusha una dulqaadanaya duruufaha ku xeeran.
Haddaba dalkeena somaliland oo Marag madoona in bulshadu soo rafaaday una badan tahay danyar noloshu siyaabo badan u soo bara saartay oo ah BARAKACAYAAL WAAYAYSAN sida qaar dantu soo dibad saartay oo waligoodba magaalo joog ahaa iyo qaar abaarihii soo barasaareen iyo qaar dagaaladii dalka ka dhacay noloshoodi iyo hab dhaqankay u noolaayen sirgacday.
Dadkaas oo Hal u jeedo leh Dantuna midaysay balse ulanaya in waagii baryaaba waayo lehe
ay halgankaa noloshu u keeni doono isbadel dhaqaale oo
ay gacantooda ku keenen ayaa iskugu yimid faras magaalaha magaalooyinka somaliland, timide maxaa kula taaga ama tamarin ah? Waa hooyo suuqa tamaandho dhigatay iyo aabo kaariyoone alaab dul dhigay iyo wiil dhalin yaro ah oo isna maryo hudhaydh ah dhulka dhigay, gabadh da'yar oo shaah karinaysa. Dantaa soo wada saartay waxaad ka garataa dushooda diifta ka muuqataa maxaa Himiladii ay lahaayen hagaasisay
1. Waa arrin mucjiso iyo layaab ku noqotay waxa laga kireeyaa meeshaa ay ku haystaan alaabahaa aan soo sheegay. Mararka qaar cagafta ayaa qaada iyagoo cashuur laga qaado.
2. waxa jira meherada habeenkii markay rawaxaan waxa laga qaadaa lacago lagu ilaaliyo oo waxa jira gaadh ama waardiye habeenkii ilaaliya.
3. waxa haysta tuugo u sii gala jidka ama dhexda xilliga ay soo rawaxaan kana faro maroojiya quutal daruurigii ay soo shaqaysteen. Jugtaa gaadhaysa iyo waayaha ku xeerani waxay meesha ka saarayaan adkaysiga kartidii ay u lahaayen inay si wadaan halgankaa, dedaalkaa oo keeni lahaa in isbadel wacani dhaco kaas oo laga dareemi lahaa kor u kac ku yimaada tayada bulshada u badan danyarta ee la kacaa ku faysa.
Haddaba si cadaadiskaa looga qaado waxa wacan in laga hortago
1. dadka dhismayaasha leh ama kireystay ee hortooda danyarta ka kireynaya
2. in la sugo amaanka suuqyada iyo faras magaalaha habeenkii marka dadku ka rawaxaan
3. in la xoojiyo waayaha aniga ee roondada ah si looga hortago tuugta hooyooyinka daalan dhexda u gala siiba xilliyada ay qorsheytaan tuugtu oo ah xilliyada suuqa laga soo baxo.
Haddi intaa la sameeyo waxa dhici karta in sadex culeys ka dhaco oo kala ah
1. kiro wajahadeed
2. lacagta laga qaado si loo ilaaliyo oo waliba dad aan ahayn boolisku qaataan
3. cabsida iyo Walbahaarka ka haysta tuugta dhul jiifka ah.
Qalinkii Qoraa: Maxamed Cabdiqaadir Colhaye